Warbixin Dowladda IRAN ayaa marin u noqotay dhuxusha laga dhoofiyo Soomaaliya. – XOGMAAL.COM
Warbixin Dowladda IRAN ayaa marin u noqotay dhuxusha laga dhoofiyo Soomaaliya.
By Soomaaliya	 Last updated Oct 10, 2018
Shabakadaha Dambiyadda ayaa Iran u isticmaalayaa Bar ay marto Dhuxusha Soomaaliya ee sida sharcidarada ah loo dhoofiyo taas oo Al-shabaab ay Malaayiin doolar ka sameeyaan canshuur ahaan, sida lagu sheegay Warbixin uu Qoray Guddiga la soconka Cuneqabateynta Soomaaliya oo ay aragtay Reuters.
Waxaa Qiyaastaan ku xusan in 3 million oo jawaan Soomaaliya laga dhoofiyay Sanadkii tagay.
Al-shabaab waxay wali dhuxushu u tahay il dhaqaale waxayna ka heleeen ugu yaraan 7.5 million oo dollar sida warbixinta lagu sheegay.
Warkaan ay Daabacday Reuters wali kama aysan hadlin dalalka Imaraadka carabta iyo Iran.
Warbixinta kooxda Monitoring group waxaa ay shaaca ka qaaday in Barta koontrool ee Al-shabaab ugu faa’idada badan ay ku taalo meel 160 KM Woqooyi Galbeed kaga began caasimadda Muqdisho oo ah wadada isku xirta Magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo.
Kala qeybsanaanta Maamulka Galmudug ayaa mareysa heerkii ugu adkaa